खेलकुद – Page 196 – Medianp
यी तीन खेलाडी जसले बलोन डि’ओरका लागि रोनाल्डो र मेस्सीलाई टक्कर दिन सक्छन्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०७४११:३६
काठमाडौं, १० माघ । बलोन डि’ओरमाअर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र पोर्चुगलका लियोनल मेस्सीको दवदवा छ । पछिल्लो दश वर्षमा यी दुई खेलाडीले बलोन डि’ओर कव्जा जमाएका छन् । अब भने उनीहरुको विकल्प तयार भएको विश्लेषण गर्न
बार्सिलोना छोडेर मस्चिरानोले चाइनिज क्लबमा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०७४०९:००
काठमाडौं, १० माघ । अर्जेन्टियन डिफेन्डर जाभियर मास्चिरानोले बार्सिलोना छाडेका छन् । बार्सिलोना आएको आठ बर्षपछि उनले बार्सिलोना छाडेका हुन् । ३३ बर्षिय मास्चिरानो सन् २०१० मा लिभरपुलबाट बार्सिलोना आएका थिए । उनले बार्सिलोनामा प्राय
किरण चेम्जोङ भारतको चर्चित आई लिग फुटबल क्लब मिनर्वा पञ्जाबमा अनुबन्धित
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङ भारतीय आईलिग क्लब मीनरेभा पन्जाब फुटबल क्लबसँग अनुबन्धित भएका छन् । मिनरेभा ९ खेलमा २२ अंक जोड्दै हाल आईलिगको शीर्षस्थानमा छ । किरणले सिजनको अन्त्यसम्मका लागि क्लबमा अनुबन्धन गरेका
म्यानचेस्टर सिटी लिगकप फुटबलको फाइनलमा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०७४०८:४४
काठमाडौं, १० माघ । म्यानचेस्टर सिटी लिग (काराबाओ) कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ । सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा मंगलबार राति ब्रिस्टोल सिटीलाई ३–२ ले हराउँदै समग्रमा ५–३ को जितसहित सिटी फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो लेगमा म्यानचेस्टर
म्यानचेस्टर युनाइटेड बन्यो सर्वाधिक कमाउने क्लब, रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाले कति कमाए ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ ०९, २०७४०८:३४
काठमाडौं, ९ माघ । म्यान्चेस्टर युनाइटेड गत सिजन सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने क्लब बनेको छ । डिलोइट्टी मनि लिगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार इङलिश प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड गत सिजन सबैभन्दा बढी कमाउने क्लब
एलेक्सिस सान्चेज म्यानचेस्टर युनाइटेड आउँदा हेनरिक मेखतारियन आर्सनल गए
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ ०९, २०७४०८:२५
काठमाडौं, ९ माघ । आर्सनलका एलेक्स सान्चेज म्यानचेस्टर युनाइटेडमा अनुबन्ध भएका छन् । युनाइटेडले सान्चेजलाई आर्सनलबाट आफ्नो क्लब ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो। युनाइटेडले हेनरिक मेखतारियनलाई आर्सनल पठाएर सान्चेजलाई भित्र्याएको हो । २९ वर्षे चिलियन सान्चेजले
अन्तिम स्थानका स्वान्सी सिटीसँग चौथो स्थानको लिभरपुल पराजित
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ ०९, २०७४०७:५३
काठमाडौं, ९ माघ । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल कमजोर प्रतिद्वन्दीसँग पराजित भएको छ । सोमबार राति भएको खेलमा अंक तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको लिभपरपुल पुछारमा स्वान्सी सिटीसँग पराजित भएको हो । स्वान्सीका लागि ४० औं
नेयमार भन्दा ह्यारी केन रियल मड्रिडको प्राथमिकता ! बन्लान त संसारकै महंगा खेलाडी ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०८, २०७४१४:२२
काठमाडौं, ८ पुस । स्पेनिस महारथी रियल म्याड्रिड ह्यारी केनलाई विश्वकै महंगा खेलाडी बनाउन तयार रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । टोटेनह्यामका इङ्लिस स्ट्राइकर केनलाई मंहगो रकममा अनुबन्ध गर्न रियल तयार रहेको बताइएको छ ।
नेयमार बिनाको पिएसजी लियोनसँग हार्‍याे
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०८, २०७४०८:१६
काठमाडौं, ८ माघ । फ्रेच्न लिग वान लिडर पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) पराजित भएको छ । आइतबार राति अवे मैदानमा भएको खेलमा पिएसजी लियोनसँग २–१ गोलले पराजित भएको हो । खेलको दोस्रो मिनेटमै नबिल फेकिरले
मेस्सी र स्वारेज चम्कँदा बार्सिलोनाको सहज जित
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०८, २०७४०८:०३
काठमाडौं, ८ माघ । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले रियल बेटिसलाई हराएको छ । आइतबार राति अवे मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले बेटिसलाई ५–० ले हराएको हो । बार्सिलोनाको जितमा लियोनेल मेस्सी र लुइस स्वारेजले २–२ गोल